Soo dejisan AOMEI PE Builder 2 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariLive CD & USB gaariAOMEI PE Builder
Qeybta: Live CD & USB gaari
Bogga rasmiga ah: AOMEI PE Builder
AOMEI PE dhise – software ah si ay u abuuraan jawi Downlaods on CD, DVD ama kaydinta USB ku salaysan Windows PE ama badbaadin galay file image ISO ku wadid aad u adag. AOMEI PE dhise yimaado la set oo ah software dhinac saddexaad ah si ay u ilaaliyaan nidaamka, la files shaqeeyaan iyo xakameeyo shabakadda. software The kuu ogolaanayaa inaad ku darto files ama dukumentiyada adiga ku gaar ah qaabab kala duwan, software la qaadi karo, fayl iyo wadayaasha, helitaanka lagu bixiyey ka dib markii la bilaabay nidaamka warbaahinta a Downlaods. AOMEI PE dhise ayaa tababare ka dhisay-in si loo xakameeyo adag maqaal qoruhu disk iyo qalab si gurmad iyo soo celinta xogta. AOMEI PE dhise kale oo uu leeyahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
Abuuritaanka warbaahinta a Downlaods aan AIK / WAIK
set A of software dhisay-in si ay u ilaaliyaan nidaamka
Isagoo intaa ku daray of files u gaar ah, fayl iyo darawallada aad
Dhisay-in tababare si loo xakameeyo maqaal qoruhu disk ah
Dhisay-in qalab si gurmad iyo soo celinta xogta
Soo dejisan AOMEI PE Builder
Faallo ku saabsan AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder Xirfadaha la xiriira